Kpee ekpere ka ọ rọrọ nrọ m. ? Abalị a ma chee m
Kpee ekpere maka ya nrọ m. Ọ nwere ike ịdị ka omume ịchọ ọdịmma onwe onye naanị mana eziokwu bụ na nke a nwere ike ịbụ a nke ekpere kacha obi eziokwu anyị nwere ike ime na ndụ anyị.
Intobanye na nrọ nke onye ọzọ nwere ike ịbụ esemokwu ma ọ bụrụ na ejighi ya rụọ ọrụ dị mma, ọ bụ ya mere anyị ga-eji mara ihe niile ahịrịokwu a pụtara tupu anyị emee ya ka anyị nwee ike ime ihe n'eziokwu.
1 Gịnị bụ ekpere a maka ịrọ nrọ banyere m?
2 Ekpere ka mụ na gị richaa n’abali a
3 Ekpere ka ịchebara m echiche
4 Ekpere bu Mmuo Nso iji soro m rro nrọ
5 Ekpere ka ura ghara igu m chee maka m
5.1 Enwere m ike ikpe ekpere niile?
Kedu ihe bụ ihe a Ekpere ka mụ na ya rọọ nrọ?
Ezigbo ebumnuche doro anya, iji mee ka onye ahụ rọọ nrọ banyere gị, na ọbụghị n ’nrọ ị nwere ike ichefu banyere onwe gị.
Se Inwere ike itinye n'ọrụ n'ọnọdụ ndị ahụ metụtara mmekọrịta anya N'ime nke a, onye nke ọzọ nwere ike ịnwe ike ma ọ bụ dị mfe ichefu gị.
Ha na-ekwu na nrọ dị ike na ọ bụ ya mere anyị ji arịọ ka anyị nọrọ na ha ogologo oge iji mee ka obi dị anyị mma.
Enwere ike ikpe ekpere a oge niile na ebe niile.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na onye ahụ nwere ogologo oge na-ahụghị anyị ma ọ bụ na-agwa anyị okwu, ihe dị mkpa n'ezie bụ na ọ na-eche echiche na nrọ anyị oge niile.
Ekpere ka mụ na gị richaa n’abali a
Nrọ na mu na ura taa, onye m hụrụ n'anya,
Ọ dị mma, mkpụrụ obi anyị ga-ebikọ ọnụ!
Ka mụ na gị rịa nrọ taa, onye hụrụ gị n'anya ruo mgbe ebighi ebi, n'ihi na abụ m
Ihe obula ichoro;
Ejiri m ike nke akara aka kọọ
N’ebe ị na-eche echiche, ọdịdị m
Olu m wee mee ka ndị a mee dị ka
Ọnụnọ n'ime gị n'abalị a.
Anyị ga-efekọ ahịhịa ga-amabeghị;
Anyị niile ga-esoro n'oké osimiri;
Anyị ga-enwe ọ enjoyụ n'oké ọhịa;
Echiche gị ga-abụ njedebe mana ebee
Na ị na-eme ya, ọ ga-abụ mụ na gị mgbe niile.
Ka okwu ndị a bata gị n’obi
Ha na-agbaze n'ime gị
Na arapughi m n'ahụ gị
Ọbụghị mgbe ị mechiri anya
Jiri ike nke ekpere soro m rite na abali a.
Ọ bụ ụdị ekpere a kapịrị ọnụ karị n'ihi na anyị na-arịọ ka ọ pụta na nrọ gị banyere otu abalị ahụ anyị na-ekpe ekpere.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ ike niile ma dịkwa irè.
O yikarịrị, ka abalị ahụ anyị nụrụ banyere nrọ ọ nwere dị ka onye anyị na ya ebe ọ nwere ike gbalị ịbịakwute anyị n'ihi na nrọ na-enwe oke mmetụta.
Ekpere ka ịchebara m echiche
Kpọọ m ugbu a, ugbu a ...
(Kwuo aha onye ahụ)
N'oge a, ebe ọ bụla. N'oge a ị ga-etinye ntinye uche gị na echiche gị ...
Ghota na ịgaghị e biri ma m enweghị ndụ. N’oge a, ị ga-amalite ịtụfu mpako gị. N’oge a ị dị njikere ịkpọ m. Ugbu a ị na-eche maka m ...
You ga-anwa iguzogide? Emegwara. Ọ bụrụ na…
(N’uche aha onye ahu) Akpọla m ugbua, igakwa ikpọọ m ma emesịa. Ma ugbu a obi sie gị ike na ị ga-akpọ m.
Ghota na I huru m n’anya, I nweghi ike ibi n’enweghi ọnum. N'oge a ị na-eche maka m ...
(Kpopụta aha gị) A na m akpọku ndị mmụọ ozi atọ, Miguel, Gabriel na Rafael, iji nye ìhè gị ...
(Kpoo aha onye ahu) ma kagbuo ajuju gi. Ihe Maịkel ga-achụpụ n’ebe ị nọ bụ mmụọ nke ajọ ihe na mmetụta niile nke ihe ọjọọ.
Gebriel kwuwaara gị… (Ahapụta aha onye ahụ) Aha m, nke ahụ megharịrị okwu ahụ bụ ""hụnanya" na ntị gị ma ị na-echeta m ...
(Kwupụta aha gị) Rafael jiri balm agwọ ọrịa iji gwọọ enweghị ntụkwasị obi nke tolitere n’ime obi gị, na idobe ọnya nke “"hụnanya” na ọchịchọ n’ebe m nọ…
(Kwuo aha gị).
Ya mere Bụrụnụ!
Banye n'echiche onye ozo ma metụta ha otua ụra na-eche banyere anyị Ọ dị ka arịrịọ nke na-echekarị banyere onwe ya ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ na ụfọdụ nwere ike iche na anyị bụ ndị mwakpo n'ihi ịbanye na akọnuche mmadụ na-enweghị ikike ha, mana eziokwu bụ na anyị na-arịọ maka ọrụ ebube, na-eji ngwa agha ime mmụọ maka ihu ọma anyị.
Anyị kwesịrị ijide n'aka, okwukwe nke ahụ ahịrịokwu a ga-arụ ọrụ achọrọ na-enweghị mgbakasị ahụ ma ọ bụ ụfọdụ ihe ọghọm a na-achọghị na maka ihe ọ bụla adịghị mma karịa idobe obi ahụ ike pụọ n'ọchịchọ ọjọọ na ike ọjọọ.
Ekpere bu Mmuo Nso iji soro m rro nrọ
Site n'ike nke Santa Muerte na mkpụrụ obi atọ Santa Muerte na-eche JOGF ga-abịa ugbu a Site n'ike nke Santa Muerte na mkpụrụ obi atọ Santa Muerte na-elele JOGF ga-abịa n'azụ YJDC m.
Ọ ga-abịa ije na ịhụnanya juputara na ịhụnanya; nke ọchịchọ ịlaghachi na ịrịọ mgbaghara maka ịgha ụgha na ịrịọ m na mbedo na emesịa na agbamakwụkwọ ozugbo enwere ike.
Santa Muerte, M YJDC ga-enwe ike ahụ nke JOGF chefuru ma hapụ ozugbo nwanyị ọ bụla nke ga - adị n’isi ya wee laghachi iwe m wee kwupụta ka mmadụ niile hụ.
Santa Muerte deere JOGF n'ebe nwanyị ọ bụla nọ, na ọ nwere ike ịbụ n'isi ya ka ọ na-achọ m na YJDC m n'oge niile ugbu a ma na-achọ ịnọ n'akụkụ m mgbe niile, na o doro anya na abụ m nwanyị zuru oke maka ya, na JOGF Enweghị m ike ibi na-enweghị YJDC m na JOGF nwere onyonyo m na echiche ya oge niile na ndụ ya ...
Ugbu a ebe mụ na ya nọ, JOGF ga-achọ m maka na echiche ya dị na YJDC m
Ma mgbe ị lakpuru ụra na ị rọrọ m nrọ na mgbe ị tetara na ị na-eche maka m ma chọọ m, mgbe ị na-eri ihe na-eche banyere m, mgbe ị na-azọ ụkwụ na ị na-eche m, n'oge niile nke ndụ gị chee banyere YJDC… m.
Ekpere a na ọnwụ dị nsọ ka mụ na ya rọọ nrọ bụ otu n'ime ndị a kacha mara amara.
Nnukwu ike na ọrụ ebube Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ ọrụ ebube a na-agba akaebe gburugburu ụwa nke arịrịọ zara n'okwu a.
Enyemaka dị ike ka onye ahụ pụrụ iche kwụsịghị ịrọ nrọ banyere gị.
Santa Muerte nwere ike bụrụ onye inyeaka anyị, nke nwekwara ike inyere anyị aka n'ụfọdụ ọnọdụ ịhụnanya ndị ọzọ enwere ike nwebi olileanya.
Ekpere ka ura ghara igu m chee maka m
Mgbe m kwuchara okwu ndị a,
Ndi m hụrụ n'anya, ị ga-aralụrị ọ andụ na nro nke m!
Idahaemi, ke ntak afanikọn̄, ukpọn̄ fo ye ekem
Ha anaghị edina ọnụ, mana ọ bụ naanị ihe achọrọ ka ọ dị mkpa
Nke ike nke akara ka ihe a wee gbanwee mee ihe ọma.
Will ga-arọ nrọ m nke ukwuu,
N’ebe ahụ ka anyị ga-ahụ onwe anyị n’anya dị ka enweghị onye ọzọ !;
A ga-ejikọ njikọ anyị
Na mgbe ị ga-eteta, ị ga-enwe obi ihunanya
Onye chere gi ogologo oge.
Gee ntị n'okwu ndị a, ezigbo, ha ga-abụ ndị mmadụ ga-agba mmiri
Thathụnanya ga-etolite ma site ugbu a gaa n'ihu.
Ka ndị agha na - esonyere m mgbe ọ bụla bulie ha
Buru ebe obibi gị, mgbe i mechiri anya,
Fesa ya n’elu ihu gị ma mepụta ihe onyonyo m
Na nrọ mbụ gị n'abalị a.
Prayerdị ekpere a dị ọfụma, maka na echiche na-aghọrọ ebili mmiri dịka oke osimiri, akwụsịkwala ịbịa na ịga, ihe a niile bụ ebumnuche nke na onye a anaghị echezọ anyị.
N’ihi ihe ụfọdụ anyị nwere ike ịchọta onwe anyị nọ n’ebe dị anya ma nwee mkpa nke a kpatara ihe n’ime onye ahụ m hụrụ n’anya, ka anyị nọrọ ya n’oge niile n’ihi na ọ bụ n’ọnọdụ ndị ahụ ebe ekpere a bụ naanị ụzọ anyị ga-esi pụọ.
Mụta iji ngwa ime mmụọ ndị a na-ewe oge, mana ihe kachasị mkpa bụ ịnọrọ na okwukwe siri ike ma na-enweghị ike.
Enwere m ike ikpe ekpere niile?
Azịza ya bụ Ee.
A na-ahazi ekpere niile ka anyị daba na nke ọ bụla n'ime ha ma mee ka ha rụọ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla ibilite na ndụ.
N’agbanyeghi etu anyi siri hu ihe anyi ario aririo, anyi gha enwe obi ike na oburu na anyi jiri okwukwe ju ajua, agam enweta ihe nile oburu n’enweghi ike.
Nwere mmasị n’ekpere ahụ ị rọrọ nrọ gbasara m?
Ekpere 4 iji kpọọ m
Ekpere maka Saint Cyprian